Afo Airbus A320 Family Mega Pack FSX & P3D
Ho an'ny modely tsirairay dia misy cockcit virtuel (VC) miaraka amin'ny fanontana manokana V3 (3.05) nataon'i François Doré, izay manatsara ny tena zava-misy (ilaina ny mamaky ny boky amin'ny teny anglisy na frantsay).
Ahitana ny kitapo BLUE LED izay manazava ny kabine virtoaly miaraka amin'ny LED manga.
Anisan'izany ny GPWS, AUTOFLARE, sns. Ary fomba amam-panao am-polony maro miaraka amin'ny jetway sy code codes ho an'ny tsirairay. Textures des VC modifiés dans HD.
ZAVA-DEHIBE: Miseho ny fiaramanidina Mangatsiaka sy maizina fomba (môtô sy fitaovana mivoatra). Vakio ny mpampiasa feno boky ny François Doré, izay tafiditra hahafantatra ny startup paika ny Bleeds, mbola mamela ny mpanoratra Ctrl + E asa mba hanomboka avy hatrany ny fitaovana amin'ny Fly By Wire maody ao amin'ny "LALÀNA ara-dalàna".
FANTASY MANDRAKIZAY: Raha tsy maneho ny tontonana ambony, dia mila izany ianao FSX-SP2. Ny takelaka rehetra dia mitaky farafaharatsiny FSX-P2 or FSX- Fanafarana na FSX Fanontana Steam na Prepar3D ...
Raha tsy manomboka amin'ny seza mangatsiaka sy maizina ny sidinao na raha Nosokafana ny môtera avy hatrany rehefa vita ny fanalana azy, izany dia satria ny safidinao tsy miovaova dia ny dingam-panidina marina voalohany FSX, miaraka amin'ny ULM, manidina amin'ny "seranan'ny zoma".
Mba hamahana ny olana dia mila manamboatra sidina fotsiny ianao, miaraka amin'ny fiaramanidina safidinao, ary ny seranam-piaramanidina safidinao, rehefa feno ny sary dia vonoy daholo ny rafitr'ity fiaramanidina ity (motera, batterie, ignition) ary vonjeo ny sidina amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny boaty fanamarinana ao amin'ny fikandrana "Vonjeo ny sidina" antsoina hoe "ataovy ity ny sidina mahazatra"
Dia mialà FSX.
Sokafy ny rakitra FSX.CFG (miaraka amin'ny Notepad) hita ao amin'ny:
Raha eo amin'ny Vista na Seven na Windows 10 ianao dia "C: - Users - username - App Data - Roaming - Microsoft - FSX"
raha ao Windows XP ianao "C: - Documents and Settings - anarana fampiasa - Application Data - Microsoft - FSX"
Ao amin'ny fizarana [MAIN], ampio ny tsipika: DisablePreload = 1
Haverina velomina FSX, voahitsy ny olana.
Lisitry ny repoblika modely:
Mexicana de Aviación - New fanamian'ny
Mexicana de Aviación - Old fanamian'ny
Air Madagascar - Retro fanamian'ny
Malagasy Croatian Airlines
Finnair - Retro fanamian'ny
Anarana iombonana amin'ny Governemanta
Iberia - Retro fanamian'ny
Meridiana Airlines - Retro fanamian'ny
Fanahy Air Madagascar
Air Madagascar Tango
United Airlines (Livery mialoha sy fanombohan'ny merger)
i Vietnam Airlines
Nohavaozina taminy 01 / 08 / 2018: Nampiditra FMC (Honeywell FMC) maimaim-poana, nampiana fanamafisam-peo ho an'ny V-Speeds sy "Ground Handling". Ankehitriny mifanaraka amin'ny Prepar3D v4.3. Nohavaozina tamin'ny installer v10.5
Nohavaozina taminy 10 / 03 / 2018: Nametraka fanondro diso momba ny kapoka ao amin'ny vilanin-javaboary virtoaly miampy ny fanovana ny refy (noforonin'i Tomi Koivunen "project_airbus_modification.zip"). Nampidirina ny gauge Jacob Larsen V-Speed ​​(fikajiana mandeha ho azy ny V1, V2, ary V3) miaraka am-bava. Nanampy ny takelaka "Flight Data" (noforonin'i Hans Zuidervaart) izay ahafahana mamoha ny varavarana sy ny efitranon'ireo valizy amin'ny tsindry tsotra, ahafahana mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny simulation ary manome fampahalalana ankapobeny momba ny sidina sy ny fanjakan'ny fiaramanidina. Nanampy tontonana iray izay mamela ny fiasan'ny Pushback mandeha ho azy sy miaraka amin'ny feo (noforonin'i Rob Barendregt "rcbgh-50.zip")
Nohavaozina taminy 05 / 09 / 2017: Auto-installer dikan-ny faha-10, mifanaraka amin'izao fotoana izao Prepar3D v4 (voazina), fanavaozana ny dsd_fsx_xml_sound sy dsd_p3d_xml_sound_x64 amin'ny version 5.2.5 (Ny antso amin'ny asa atao P3D v4)
Downloads 716 616